Iiprojekthi zeMveliso-Ukupakisha kwe-BXL yoyilo
Izinto zokuthambisa Ukutya Utywala Nezacholo Isiqhumiso Ikhandlela elimnandi
I-BXL Creative isebenza ngezinto ezintsha, izakhiwo ezitsha kunye neetekhnoloji ezintsha, ezinje nge-counterfeiting, i-3D UV, i-3D embossing, ipateni ebonakalayo yothango, kunye nee-inks ze-thermochromic njl. .
Kwangelo xesha, ukupakishwa okuhambelana nokusingqongileyo kukwathatha inxaxheba enkulu. I-BXL yenza umsebenzi omkhulu wokulinganisa uyilo lwembonakalo, ukusebenza kunye neemfuno zayo ze-eco.
I-BXL Creative ibonelela ngezinto ezikumgangatho wokutya, izisombululo ezivunyiweyo ze-FDA kunye neephakheji yabathengi bokutya abaphezulu kunye nasekhaya nakwamanye amazwe. Ngelixa ufezekisa ukubukeka kwephakheji entle, i-BXL ayilalanisi kwinkxalabo yokhuseleko lokutya.
Ukupakishwa kwewayini kunye nemimoya yenye yezona zinto ziphambili kwi-BXL. Ngokukodwa kwimakethi yasekhaya yase-China, i-BXL Creative yenye yezona nkampani ziyila kakhulu kunye nabenzi beepakethe, ezibonelela abathengi ngezisombululo zemveliso ezingundoqo, ezigubungela ekudaleni uphawu olutsha ngokupheleleyo kuphando lwentengiso, ukuqonda, ukubiza igama, ukubeka indawo uphawu, ukuthengisa amacebo, uyilo lwe-boutique, uyilo lwephakeji, uyilo lweencwadana, njl.
Okwangoku, iipesenti ezingama-80 zeemveliso zokupakisha zeenkampani zithunyelwa eYurophu naseMntla Melika. Ngamava atyebileyo kwimisebenzi yokuthumela ngaphandle kunye nolawulo lweprojekthi ye-OEM kunye ne-ODM, i-BXL inokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zokupakisha kubathengi.
I-BXL yoyilo inoluhlu olubanzi lweshishini lokupakisha, apho iziqholo / ivumba lelinye lezona ndawo ziphambili. Abathengi ikakhulu baseYurophu, eMntla Melika, Mid-East, Australia, njl.
I-BXL Creative inamava eminyaka emininzi kwimveliso yokupakishwa kwamakhandlela anuka kamnandi okoko yaqala ishishini layo lamanye amazwe. Ukuza kuthi ga ngoku, abathengi bagubungela uninzi lweemveliso ezaziwayo zeshishini.
Ukuqhwa kwekhephu elincinci
Iyakwazi ukufezekisa ukugqitywa kwekhephu. Xa idityaniswe noyilo lwegraphic, inokwenza imbonakalo ekhethekileyo ye-deco.
Ichanekileyo kwaye ichanekile ngakumbi kunesitampu eshushu rhoqo. Le deco yenzelwe ngokukodwa imigca emincinci, enesikhumba, amachaphaza, iileta kunye neepateni, ezingenakwenziwa sisitampu esishushu. Inokufezekisa ukugqitywa kwesitampu se-foil ngokumisa kakuhle nangokuchanekileyo. Iqaqambisa ubumnandi bepateni, ubuhle, ubuhle, ubeko oluninzi kunye nomtsalane.
Le nkqubo ifezekiswa ngokudibanisa isikrini sesilika kunye nesitampu esishushu. Ihambisa ngokugqibeleleyo i-deco yokuhombisa kunye nokugqitywa kwesinyithi, okugcina ukubambeka kwimbonakalo yentsimbi yokunceda, kuzisa ifuthe elinamandla lokubonwa kunye nokubonakala kwesinyithi kwe3D.
Xa indawo ye-UV idibana nefuthe le-3D, ihambisa ukuchukumisa okukhulu kunye nefuthe elibonakalayo.
Ukudala isiphumo esiguqukayo, ukufezekisa ifuthe elibonakalayo lokujonga.
Uxinzelelo lobushushu, iipateni kunye nemigca ziguqulwa ngaphezulu kwiphepha, ukutshintsha umbala wephepha ukwenza ukukhanya kunye nomthunzi umahluko kumbala wephepha elingemva, olomeleza ukuthungwa kunye nokuziva ngesandla kwephakheji.
Ubuncwane be-3D eyongezelelweyo
Iipateni kunye neegrafu ezinqwenela ukufezekisa ubuncinci be-3D emboss yokuluka ngocingo kunye nokwenza ifuthe elibonakalayo lokubonwa, iBXL Creative ngokuqinisekileyo inokukwenzela yona.
Embossing ngefoyile ye Label Iphepha endaweni ileyibhile yesinyithi
Iipateni zemigca yokukhanya ene-concave kunye ne-convex layering kunye ne-handis yesandla ekhutshiweyo kwiphepha eliqhelekileyo elisisiseko sephepha ngohlobo olukhethekileyo lwemigca yokukhanya ukuze kuveliswe ubume bokutyeba, ubumnandi kunye nomxholo obuninzi, ke ngoko ubume bentsimbi obunamandla kunye nefuthe lokubonwayo.
Elungiselelweyo Ipatheni Texture
Le nkqubo ifezekiswa nge-embossing. Ukukhetha okungahambelaniyo kwemigca eyahlukeneyo kunokwenziwa ukuthelekisa. Ngenkqubo ebonakalayo, umfanekiso uyalawulwa ukuba uthathe ubungqongqo obunemilinganiselo emithathu kunye nemigca ecacileyo yeepateni, ukuvelisa ubuhle, umahluko omkhulu kunye nokuziva kakuhle kwesandla sayo yimigca yokubonakalisa inemibala kwaye inefuthe elibonakalayo lokujonga.
Kumgangatho we-6, iBloko enye, iShenye Jinyuan Building, iQingshuihe, iLuohu, iShenzhen, CHINA, 518023.
Malunga neBXL yoyilo
Nxibelelana neqela lokuyila le-bxl!
Cela imveliso yakho namhlanje!
Siyavuya ukuphendula izicelo zakho kunye nemibuzo.